Ihe mere ndi uka gi ji adighi gi nma | Martech Zone
Ọ bụ ezie na enwere m ekele maka arụmụka tweet site n'oge ruo n'oge, oge ọ bụla ọ ruru eru ịkekọrịta mkparịta ụka a ma tụlee ya n'ihu. Ihe atụ m na-enye taa bidoro site na nkwupụta mgbasa ozi nke anyị na Dittoe PR rụkọrọ ọrụ iji kwupụta nke ọhụrụ ha website.
PRDude… onye kwuputara onwe ya onye agbachitere nke ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze onye chiri aha ya (nnukwu atụmatụ ọha na eze), were mbipụta ndị nchụ nta akụkọ ịrụ ọrụ n'ihi na ọ dabaghị n'ọhụụ ya mbipụta ndị nchụ nta akụkọ a ga-tinye n'ọrụ maka… ozi ọma. Aga m ekwe ka ị gụọ mkparịta ụka ahụ:
Asusu bu na otu n’ime ihe mere anyi ji enwe obi uto n’iile Dittoe PR ihe bụ na ha ghọtara na mbọ ha na-agba maka mmekọrịta ọha na eze bụ otu akụkụ nke usoro ahịa azụmaahịa. Anyị arụwo ọtụtụ ndị ahịa wee nweta nsonaazụ pụrụ iche site na iji mgbasa ozi mgbasa ozi na iji ọchụchọ siri ike na atụmatụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mgbasa ozi a kapịrị ọnụ bụ otu usoro n'ime usoro niile anyị na-esi agwa ndị mmadụ okwu.
Ọ na-akụda mmụọ na ụdị ụlọ akwụkwọ ochie nke PR dịka PRDude adịghị aghọta ahịa inbound, njikarịcha ntụgharị, ọdịda peeji nke atụmatụ, akara, mmata, njikarịcha njin ọchụchọ… ma mgbe ụfọdụ, ha anaghị amata uru niile nke nnukwu ọdịnaya. Otu n'ime ụlọ ọrụ PR kachasị ukwuu n'obodo anyị mechiri emechi n'oge na-adịbeghị anya… ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe ma ha enweghị ike ijide. Echere m na nke ahụ bụ ihe PRDude bụ na-agbachitere.
Site na tweeting banyere nke a - n'agbanyeghị na ọ na - agagharị - PRDude enyela ihe akaebe na mgbasa ozi mgbasa ozi anyị bụ ihe ịga nke ọma. Enwere m mmasị n'eziokwu ahụ na ọ na-ekweta na ọ chọtara ntọhapụ na nnukwu ntinye na Google News. Nke ahụ dị egwu! Anyị doro anya na anyị ruru ndị na-ege ntị na anyị enwetabeghị - ebumnuche nke nkesa anyị. (Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ya, ọ dị ka nkesa anyị nwere mpaghara agbanyeala mba na saịtị ụfọdụ.) Anyị anatala ọtụtụ tweets na weebụsaịtị kwuru site na ntọhapụ.
Ndi akuko abụghị nanị banyere ide “akụkọ” ọzọ. The PR ụlọ ọrụ ghọrọ usoro… ma ọ na-ahapụ ụfọdụ nke ya PR ọkachamara n'azụ. Ndị ahịa na azụmaahịa na-achọ ihe ọmụma site na engines ọchụchọ, yabụ ịnwe ọnụnọ ọchụchọ dị mkpa. Ndị ahịa na azụmaahịa na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yabụ inwe usoro mmekọrịta ọha na eze dị mkpa. Agbanyeghị, ọtụtụ azụmaahịa na akụrụngwa mgbasa ozi ka na-adabere na ọrụ nkesa akụkọ iji chọta ozi ha na-achọ - yabụ mbipụta akụkọ na-arụ ọrụ nke ọma.
A Kachasị mma pịa ntọhapụ na oke nkesa ga-enye backlinks site na saịtị ndị nwere ikike dị elu na mkpa na ụlọ ọrụ gị. Anyị ahụla ọtụtụ traction na mgbasa ozi ndị ahịa anyị sitere n'aka ndị ahịa anyị, hụ ọkwa ha ka mma, ma nweta ọtụtụ ndu site na itinye ha n'ọrụ.
Aga m anọgide na-arụ ọrụ na a ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na-aga n'ihu nke ahụ na-aga n'ihu ịchọta mụ na ndị ahịa m ohere dị egwu na ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere isiokwu dị na New York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, wdg. Nke kachasị mma, ha na-egosi n'ụzọ doro anya banyere ọrụ ha Nwee obi ike ịkọ aha ha na ụlọ ọrụ ha n'ịntanetị.
Yabụ… PRDude nwere ike ọ gaghị ekwenye na m (ọ na-ebo m ebubo ugbu a karịa ịnwe ndị na-eso ụzọ adịgboroja, kwa). Nke ahụ dị mma, achọghị m ịma. Ọ bụghị ndị na-ege m ntị ka m lekwasịrị anya, ọ nweghịkwa isi maka ịdị irè nke ahịa zuru ezu anyị na-eme. Ọ bụ ezie na ọ na-agagharị iwepụta akwụkwọ akụkọ na anonymity, anyị na-enweta nsonaazụ maka ndị ahịa anyị ma na-eto azụmaahịa ha. Enwere m olileanya na otu ụbọchị ọ nwere ike ịzụ ahịa na typewriter ya ma lelee anya n'ịntanetị esi ewepụta ụzọ anyị si agwa ibe anyị okwu.
Tags: prpr ikeprduden 'akukommekọrịta ọhaneze
Dee 28, 2011 na 10: 30 AM
M na-eche ogologo oge ọ bụ kemgbe nwoke a mere ụfọdụ agụmakwụkwọ na-aga n'ihu? Ndị prọfesọ na-achọsi ike iwepụ echiche nke ntọhapụ "pịa" ma na-ekwusi ike na a na-akpọ ya "mgbasa ozi" n'ihi na ọ dị mma… ọ nwere ike mezuo ihe niile ị kwuru, Doug.
Dec 29, 2011 na 3:33 PM
Enweghị m ihe ọ bụla megide iji pịa pịa dị ka ụzọ maka ịzụ ahịa. Ihe m na-ekwu bụ na ọdịnaya nke ntọhapụ ahụ. Kedu oge ikpeazụ ị setịpụrụ onye editọ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ onye nrụpụta maka mmemme akụkọ, ihe mbụ ha na-arịọ bụ nkwupụta mgbasa ozi. Na mgbakwunye, mgbe izipu ụdị mgbasa akụkọ nke ụdị a na waya, a na-eziga ya na igbe nnabata ndị editọ. Nke a bụ ihe mere ndị editọ ji enwe asị a maka ndị mmadụ na-eziga ihe mkpofu, mgbe n'ezie, ọ bụ ndị na-ere ahịa na-eji ọrụ a maka ọdịnaya na-abụghị akụkọ. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ echiche ochie, kpọọ m ụlọ akwụkwọ ochie, mana echere m na ọ na-ewute akara karịa enyemaka mgbe ị na-ezigara ndị nta akụkọ ihere na onye ọ bụla nwere ọkara ụbụrụ maara na a gaghị ekpuchi ya. Anyị nwere ike ịrụ ụka n'ihe niile ịchọrọ, mana anyị sitere na ọrụ dị iche iche. Ana m asọpụrụ ndị m na-ezigara ọdịnaya ma na-anwa ịchọta na ọ bụ ihe ha ga-achọ. Ọ bụ maka iwulite mmekọrịta ọ bụghị gbawara emailing ụwa. Ezi afọ ọhụrụ!
Dec 29, 2011 na 6:14 PM
PR Dude - M ka na-ekwu na ọ bụ "ihe mkpofu" ma ọ bụ "ọ bụghị akụkọ". Ekwuru m banyere ihe ọchị na post a - mana enwere ụfọdụ. O yiri ka e nwere ụdị ụfọdụ 'marketer na mmekọrịta ọha na eze' ụda n'ebe ahụ. Na DK New Media mmekọrịta na DittoePR bụ akụkọ - ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ọdịnala nke gbanwere ma na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ. Na agency ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ na-achọta uru bara uru na mmekọrịta ọhaneze.
Maka na i cheghị na ọ bụ akụkọ akụkọ, ọ pụtaghị na ọ bụghị. Nzaghachi nke ndị mgbasa akụkọ ewepụtara ewepụtala ezigbo nzaghachi. N'ezie, nke gị bụ naanị nkatọ ọha na eze anyị nwere ike ịchọta. Ma, ọzọ, na-ekpe ikpe site na nnukwu ntinye anyị natara - ọ bụ akụkọ ọtụtụ ndị ọzọ nwere mmasị na ya.
Enwere m ekele maka nzaghachi ị na-aza maka mkparịta ụka ahụ!
Dec 29, 2011 na 6:34 PM
Ana m eche. Amaghị m ihe ị na-ekwu site na itinye mgbasa ozi n'agbanyeghị. Ihe mgbasa ozi nke na-akwụ ụgwọ ọrụ ya, na-ewere ihe ọ bụla na-eme na waya ahụ, mana ọ pụtara n'ezie na onye nta akụkọ ga-akwụsị ihe ọ na-eme iji kpuchie ụdị akụkọ a. Na 1996, ee, na 2011, mba. Ọ ga-eju m anya ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọ bụla dị iche iche dị ka Indy Star ma ọ bụ ọbụna ahịa dị ka Adweek ma ọ bụ Ad Age ga-enye nke a anya nke abụọ. Ọ bụrụ na ị na-atụ ya dị ka njikọta ma ọ bụ mmekorita, mgbe ahụ m na-ahụ uru akụkọ. Ebe nrụọrụ weebụ emezigharị ezughị ezu maka ụkpụrụ nke akwụkwọ akụkọ n'echiche m. Anaghị m akatọ ụzọ mgbochi, naanị ọdịnaya. Ọzọkwa, ana m aza onye nke ọzọ ọ bụghị na post gị.
O di nwute, ihe ahia vs. PR ihe na-aga n'ihu ruo ọtụtụ afọ dịka ị maara. Ọ bụghị imejọ, ma ọ masịrị m na-zoro aka dị ka a marketer. Anyị na-eje ozi abụọ dị mkpa mana dị iche iche maka ndị ahịa na ụdị na-emecha, otu ebumnuche. Ndị mmadụ na-atụkwasị obi na mmekọrịta e wuru na ndị editọ, ndị na-emepụta ihe, ndị na-ede blọgụ, wdg. Ọ na-ewe iwe ịnụ ka ha na-agwa anyị na ha na-enweta ọtụtụ akụkọ na-adịghị mkpa na igbe ha. Bu blogger na ebe ahia. You ga-agba akụkọ banyere onye ahịa mepụtara weebụsaịtị weghachite na blọọgụ gị? Kedu ndị ị ga-adị njikere ide banyere ma ọ bụrụ na weebụsaịtị ọ bụla nke megharịrị saịtị ya malitere izipu nkwupụta akụkọ banyere ya? Kedu otu esi achọpụta ihe dị mkpa iji dee na ihe na-adịghị? Biko gwa m ma ara na-enweghi isi ebe a. Ọ bụ ezumike ma enweela ọtụtụ ụbọchị ị drinkingụ mmanya. Cheers! 🙂
Dec 29, 2011 na 6:39 PM
PR Dude: Nzaghachi bụ otu anyị si achọpụta ihe anyị ga-ede na ihe anyị agaghị ede. Ọ bụrụ na nzaghachi ahụ dị mma, anyị na-aga n'ihu na-eji usoro ahụ. Ọ bụrụ na nzaghachi ahụ adịghị mma, anyị na-achọta ihe ọhụụ. Ezumike Ezinyere gị.
Dec 29, 2011 na 6:51 PM
Daalụ. Achọrọ m gị nke ọma. Mee ka m mara mgbe in no na Big Apple ma a ga m azutara gi mmanya. Enweghị arụmụka naanị sọks mara mma. Ezi afọ ọhụrụ!
Jenụwarị 3, 2012 na 1:03 PM
A dị nnọọ mma n'ikpeazụ ka arụmụka ahụ. Ekwenyere m na enwere "ọnya" dị oke ebe ahụ, mana echere m na mwepụta maka mmalite nke webụsaịtị dị mma, ọ bụkwa ihe m matara na ọ dị mma PR - dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ndị na-ege ya ntị, ụlọ ahịa na-esite na mwepụta ahụ. na-, wdg m na-adá »behind kpam kpam n'azá» ug Douglas on ya tọhapụ, ma na-ekweta na anyá »‹ kwesiri ikpachara anya banyere overdoing releases. Fọdụ na-ekpuchi ihe niile, ọ na-ewetu ọnụnọ ha ala.
Jenụwarị 5, 2012 na 1:49 PM
Nnukwu arụmụka, ma ọ dị mma ịhụ mmadụ abụọ nwere ike kwenye na-ekwenyeghị na nkwanye ùgwù! +1 unu abụọ!
Jenụwarị 13, 2012 na 6:00 PM
Daalụ. Amaghị m Doug n'onwe m, mana amaara m na ọ bụ onye a na-akwanyere ùgwù na ọrụ ya, n'agbanyeghị ebe mmadụ si, anyị niile kwesịrị ịkwanyere ibe anyị ùgwù. Achọrọ m ka onye ọ bụla nwee ike ịrụrịta ụka n'ụzọ ejiji mepere anya ọkachasị ndị ga-azọ ọchịchị ma ọ bụ onye ọ bụla na-azọ ọkwa a họpụtara. Ana m akụ nzọ anyị ga-ahụ mwakpo na adịghị mma nke onwe ka primaries na-ekpo ọkụ.